#LAND - Agụmakwụkwọ 3D maka ọrụ obodo - Ọkwa 2 - Geofumadas
#LAND - Civil Course 3D maka ọrụ obodo - Ọkwa 2
Mgbakọ, na-ebupụta, akụkụ obe, cubing. Mụta imepụta atụmatụ na ọrụ linear na Autocad Civil3D sọftụwia etinyere na Nyocha na Ọrụ Obodo
Nke a bụ nke abụọ site na usoro 4 setịpụrụ akpọrọ "Autocad Civil3D maka nyocha na ọrụ obodo" nke ga-enyere gị aka ịmụ ka esi ejikwa ngwanrọ Autodesk dị egwu wee tinye ya n'ọrụ na saịtị dị iche iche. Bụrụ onye ọkachamara na ngwanrọ ahụ wee nwee ike igbanye ala, gbakọọ ihe na ọnụahịa ihe owuwu ma mepụta atụmatụ dị ukwuu nke ụzọ, àkwà mmiri, nsị mmiri n'etiti ndị ọzọ.
AKW CONKWỌ AKW BKWỌ BASIC (2 / 4)
1 ANYANWU NA ANYI-SUJI
Nkọwapụta nke mgbakọ (nhazi).
Nhazi nke ọgbakọ dị ala (ụdị ihe: terrace, uzo, sardinel, ọwa mmiri, gutter, àkwà, njikọ, wdg).
2 LINEAR Ọrụ, ngwa na ihe:
Nkowaputa na oru nke oru ahuru.
Linear arụ ọrụ na ókè.
3. OKWU NKPORO NKE MBU
4 MOVB ANDRAR ANDB ANDR AND NA AK CKỌ:
Ubche ya na akụkọ.
Previous Post«Previous #LAND - Civil Course 3D maka ọrụ obodo - Ọkwa 3
Next Post #GIS - Usoro nkuzi ide mmiri - HEC-RAS site na ọkọNext »